Water ... NgokwemiBhalo, kuba into esuka lapho iplanethi yethu kwaba ngaphambi kokudalwa ezweni, izitshalo, izilwane kanye, yebo, abantu. Namuhla, ihlanganisa ingxenye enkulu surface eMhlabeni futhi kubhekwa ketshezi esibalulekile. It ngempela kuyinto emangalisayo engokwemvelo. Kungathatha ezihlukahlukene zithi wokuhlanganisa izinto eziwuketshezi kanye umusi a ice eqandisiwe. Kusukela ke wenze itiye futhi expanses yayo enkulukazi useyili imikhumbi. Lena ngempela into eyingqayizivele.
Ngezinye izikhathi, uma kungekho umoya, amanzi ezilwandle, emifuleni nasolwandle iyashelela ukuze ufana nesibuko. Lokhu kungenxa yokuthi liqukethe izigidigidi izinhlayiya ukukhanya-buka lokwentile, okuyinto lapho ezolile ephelele cishe musa adonse ukukhanya. Yingakho umuntu unethuba ukubona kuveza lakhe kwamanzi ufana nesibuko.
Amanzi - i material zibalulekile Emhlabeni
ERussia, kukhona cishe 30 000 amadamu kanye 2 million amachibi. Ebusweni amanzi akuyona kuphela umhlobiso omuhle, kodwa futhi kuba umthombo wokuphila izidalwa eziningi eziphilayo, kuhlanganise nabantu.
Indoda esebenzisa amanzi hhayi kuphela ngenjongo yokuphuza. Kuyinkolelo eyamukelwa abaningi isetshenziselwe ukuthengisa. I amachibi zitholakala endaweni yezwe engalingani, ngakho kwezinye izindawo ukuyisebenzisa ngokweqile, kuyilapho abanye bephoqeleka ukuba enze imizamo emikhulu ukuze ihlangabezane nesidingo eyisisekelo.
Ubuhle amanzi ethule okungavamile
Kungakhathaliseki ukuthi likude noma liseduze kothile ohlala emanzini, iningi labo likwazi ngokuqiniseka ukuthi kwamanzi - nesimangaliso esiyingqayizivele yemvelo, okuyinto umuntu akakwazi bahlala banganandaba. ulwandle Calm ngokuvamile kubalethela izinzuzo ezinkulu ematilosini. Kwaba ngenkathi kungase kube ngcono ukucabangela esondela ogwini noma ngesikhathi ukubona ingozi. Lena nakanjani engcono nephephile ukubhukuda. Ngokuvamile, lapho amanzi sesingcono kolwandle, ungabona amahlengethwa. Basuke ebhukuda main kungabonwa ekuseni entathakusa. Kukholakala ukuthi kwamanzi - kungcono njengengilazi ekhanyayo ukuze bagcine ekuphileni ichibi futhi izwe ngaphansi kwamanzi. Sand kanye ulwelwe ungagxambukeli ukubukela impilo izinhlanzi nezinkalankala. Lapho amanzi kucacile futhi ulwandle luthule liyanqoba, singakwazi ukugcina ukuphila ngezinto eziphila olwandle, abase-amamitha angu ekujuleni okungamamitha amaningana.
Ebusweni amanzi omfula Luhle ikhuthaza ukuhamba izikebhe ezincane. Kuyinto efanelekayo ethule sihambahamba umhlangano convivial yothando phezu kwamanzi. Lapho ilanga liyashona, kubonakala sengathi ngokoqobo bacwiliswa emanzini bese ubasa ngayo orange umlilo wakhe elikhanyayo. River efana iyovutha, futhi kubonakala sengathi umlilo ukufinyelela ogwini.
Sokwehlisa - prekrastno isikhathi sokugubha eziphila olwandle
isimo Amanzi anjalo ngokuvamile kuba ngenxa yokuntuleka emoyeni. Beautiful kwamanzi zingabonisa ngokugcwele yonke imibala namafu wasezulwini. Ngezinye izikhathi izithombe kunzima ukuhlukanisa lapho iphela futhi isibhakabhaka iqala bomkhathi emfuleni. Qedela ezolile phezu kwamanzi - akusiwona kuphela enhle, kodwa futhi esiwusizo kakhulu.
Abadobi uthando kulokhu, ngoba kucatshangwa ukuthi kuba sezulu ethule ezolile kungcono ukuluma izinhlanzi. Ngezikhathi ezinjalo, ke aphinde abhukude abuyele eduze kwamanzi futhi kahle ebonakalayo kusukela ogwini.
Kwamanzi - lena ngempela into emangalisayo bemvelo ubani lucky ngokwanele ukuze ujabulele abantu. Ngo sezulu ezolile kwelanga phezu komfula - ke ingenye yezinto ezinhle kakhulu ukuthi kungaba ku romance zokuphila. inkungu Morning, amafu kubonakala emfuleni inkomishi yekhofi eqinile ... Mhlawumbe lena isiqalo esihle kakhulu kosuku, okuyinto ungacabanga.